Mayelana NATHI - Shenzhen UUGreenPower Electrical Co., Ltd.
IShenzhen UUGreenPower Electrical Co., Ltd.inethimba lamandla we-R & D lobuchwepheshe, amalungu e-R & D ayisisekelo awo abekade esebenza e-Emerson & Eltek. Siqongelele isipiliyoni seminyaka ecishe ibe ngu-20 kubuchwepheshe bokuphakelwa kwamandla e-DC futhi ngokusebenzisa ukwakheka okusha siyakwazi ukuthuthukisa uchungechunge lwamamojula wokushaja afaka phakathi i-40kW, 30KW, 20KW kanye ne-15KW ekhethekile ngenqwaba enkulu yokushaja.
Sigxila ezingxenyeni ezisemqoka nezixazululo eziphelele zamandla amasha wokushaja imoto kagesi. Futhi ikakhulukazi sihlinzeka ngokuhlinzekwa okuhle kwamamojula wamandla, ukushaja amamojula wokuqapha inqwaba nokushaja ipulatifomu yokusebenza kwenqwaba njll.
Njengamanje siziqhayisa ngochungechunge lomkhiqizo olunzulu kakhulu emkhakheni wokushaja amamojula wamandla enqwaba, futhi besilokhu sigcina indima ehamba phambili ngokobuchwepheshe nemikhiqizo. Imodyuli yokushaja yesici isetshenziswa kabanzi emakethe yasekhaya naphesheya kwezilwandle. Imojula entsha yokushaja ephezulu ye-IP65 ne-40kW module yokushaja amandla amakhulu izokhishwa emakethe ngasekupheleni kuka-2020.
Njengenkampani entsha yezobuchwepheshe yamandla, i-UUGreenPower igxila emisha ye-electronics technology, futhi izibophezele ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekwenziweni nasekuthengisweni kwezinto ezisemqoka zemishini yokushaja ephezulu. Siphikelela ekuxazululeni amaphuzu obuhlungu bamakhasimende, sikhula ndawonye namakhasimende, futhi ngokuhlanganyela sikhuthaza ukuthuthukiswa komkhakha wezimoto zikagesi ngamandla aluhlaza nangomnotho onekhabhoni ephansi.
Njengamanje, imikhiqizo yenkampani ihlolwe futhi yaqinisekiswa yi-State Grid Electric Power Research Institute, isitifiketi se-CE, isitifiketi se-UL. Imikhiqizo isetshenziswe kabanzi emakethe yasekhaya nasemakethe yaphesheya kwezilwandle, futhi inokubambisana okujulile namakhasimende avela e-United States, Germany, France, Italy, South Korea, Thailand nase India.
I-UUGreenPower yaqala ukwethula imojuli yokushaja engu-30kW ngoJuni 2017. Ingumkhiqizi wokuqala onobuchwepheshe bemodyuli evuthiwe engama-30kW embonini, futhi futhi ungomunye wabakhiqizi bamamojuli abambalwa embonini abenze ngobuningi amamojula angama-30kW futhi afakazelwa yi isicelo semakethe. Njengoba amandla kagesi wemodyuli yokushaja engu-30KW efinyelela ku-45W / in3, ukusebenza kahle kokuguqulwa kuphezulu, ukusebenza komkhiqizo kuhle kakhulu futhi inzuzo yezindleko isobala, imodyuli yamandla engu-30kW isheshe yathatha ukushaja okuphezulu namandla aphezulu. emakethe.
I-UUGreenPower izoqhubeka nokukhuphula utshalomali lwayo lwe-R & D kumashajuli wamandla aphezulu wokushaja nakumamojuli wokusebenza okuphezulu. Imodyuli yokushaja amandla amakhulu engama-40kW kanye ne-IP65 module yokuvikela okuphezulu izokhishwa ekupheleni kuka-2020 okuzoqhubeka nokuhlanganisa isikhundla esiphambili senkampani emkhakheni we-EV ukushaja nokukhipha izixazululo.